4 Mose 26 AKCB - Matteus 26 LB
Israel Nnipakan A Ɛto So Abien
1Ɔyaredɔm no akyi no, Awurade ka kyerɛɛ Mose ne ɔsɔfo Aaron babarima Eleasar se, 2“Monkan Israelfo mmarima a wɔadi mfe aduonu ne nea ɛboro saa nyinaa na monhwɛ dodow a wobetumi akɔ ɔsa ama Israel wɔ abusua biara mu.” 3Enti Mose ne ɔsɔfo Eleasar kasa kyerɛɛ wɔn wɔ Moab tataw so, wɔ Asubɔnten Yordan ho a na wɔatra Yeriko no se, 4“Monkan mmarima a wɔadi mfe aduonu ne nea ɛboro saa sɛnea Awurade hyɛɛ Mose no.”
Eyinom ne Israelfo a wofi Misraim bae no:
5Eyinom ne Yakob babarima panyin Ruben asefo:
Hanokfo abusua, wɔde too wɔn tete agya Hanok;
Palufo abusua, wɔde too a wɔn tete agya Palu;
6Hesronfo abusua, wɔde too wɔn tete agya Hesron;
Karmifo abusua, wɔde too wɔn tete agya Karmi.
7Mmarima a na wɔwɔ Ruben mmusua nyinaa mu no dodow yɛ mpem aduanan abiɛsa ahanson aduasa (43,730).
8Na Palu yɛ Eliab babarima, 9na Eliab mmabarima ne Nemuel, Datan ne Abiram. Saa Datan ne Abiram yi ara na wɔyɛ nnipa no ntuanofo a wɔka Kora akyidifo a wɔyɛɛ adwene tiaa Mose ne Aaron, de buu Awurade animtiaa no ho. 10Na asase mu bue menee wɔne Kora. Ogya fi Awurade nkyɛn bɛsɛee wɔn akyidifo ahannu aduonum. Na wɔyɛɛ kɔkɔbɔ nsɛnkyerɛnne. 11Nanso Kora ase antɔre.
12Eyinom ne mmusua a wofi Simeon ase:
Nemuelfo abusua, wɔde too wɔn tete agya Nemuel.
Yaminfo abusua, wɔde too wɔn tete agya Yamin.
Yakinfo abusua, wɔde too wɔn tete agya Yakin.
13Serafo abusua, wɔde too wɔn tete agya Serah;
Saulfo abusua, wɔde too wɔn tete agya Saulo.
14Mmarima a na wɔwɔ Simeon mmusua mu nyinaa dodow yɛ mpem aduonu abien ne ahannu (22,200).
15Eyinom ne mmusua a wɔyɛ Gad asefo:
Sefonfo abusua, wɔde too wɔn tete agya Sefon;
Hagifo abusua, wɔde too wɔn tete agya Hagi;
Sunifo abusua no, wɔde too wɔn tete agya Suni;
16Osnifo abusua, wɔde too wɔn tete agya Osni;
Erifo abusua, wɔde too wɔn tete agya Eri;
17Arodfo abusua, wɔde too wɔn agya Arod;
Arelifo abusua, wɔde too wɔn tete agya Areli.
18Mmarima a na wɔwɔ Gad mmusua mu no dodow yɛ mpem aduanan ne ahannum (40,500).
19Na Yuda wɔ mmabarima baanu a wɔn din de Er ne Onan a wowuwuu wɔ Kanaan asase so.
20Yuda asefo mmusua a edidi so yi:
Selafo abusua, wɔde too wɔn tete agya Sela;
Peresfo abusua, wɔde too wɔn tete agya Peres;
Serafo abusua, wɔde too wɔn tete agya Serah.
21Eyinom ne mmusua a wofi Peres ase.
Hesronfo abusua, a wɔde too wɔn tete agya Hesron;
Hamulfo abusua, wɔde too wɔn tete agya Hamul.
22Mmarima a na wɔwɔ Yuda mmusua mu no nyinaa dodow yɛ mpem aduɔson asia ne ahannum (76,500).
23Eyinom ne mmusua a wofi Isakar ase:
Tolafo abusua, wɔde too wɔn tete agya Tola;
Puwafo abusua, wɔde too wɔn tete agya Puwa;
24Yasubfo abusua, wɔde too wɔn tete agya Yasub;
Simronfo abusua, wɔde too wɔn tete agya Simron.
25Mmarima a na wɔwɔ Isakar mmusua no mu no nyinaa dodow yɛ mpem aduosia anan ne ahaasa (64,300).
26Eyinom ne mmusua a wofi Sebulon ase:
Seredfo abusua, wɔde too wɔn tete agya Sered;
Elonfo abusua, wɔde too wɔn tete agya Elon.
Yakleefo abusua, wɔde too wɔn tete agya Yakleel.
27Mmarima a na wɔwɔ Sebulon mmusua no mu no nyinaa dodow yɛ mpem aduosia ne ahannum (60,500).
28Ɛnam Manase ne Efraim so na mmusua abien fii Yosef mu bae.
Makirfo abusua, wɔde too wɔn tete agya Makir;
Gileadfo abusua, wɔde too wɔn tete agya, Makir babarima, Gilead.
30Eyinom ne mmusua a wofi Gileadfo ase:
Yeserfo abusua, wɔde too wɔn tete agya Yeser;
Helekfo abusua, wɔde too wɔn agya Helek.
31Asrielfo abusua, wɔde too wɔn tete agya Asriel;
Sekemfo abusua, wɔde too wɔn tete agya Sekem;
32Semidafo abusua, wɔde too wɔn tete agya Semida;
Heferfo abusua, wɔde too wɔn tete agya Hefer.
33Hefer babarima Selofehad annya mmabarima nanso na ɔwɔ mmabea a wɔn din de Mahla, Noa, Hogla, Milka ne Tirsa.
34Mmarima a na wɔwɔ Manase mmusua no nyinaa mu dodow yɛ mpem aduonum abien ne ahanson (52,700).
35Eyinom ne mmusua a wofi Efraim ase:
Sutelafo abusua, wɔde too wɔn tete agya Sutela;
Bekerfo abusua, wɔde too wɔn tete agya Beker;
Tahanfo abusua, wɔde too wɔn tete agya Tahan.
36Eyinom ne Sutela asefo:
Eranfo abusua, wɔde too wɔn tete agya Eran.
37Eyinom Efraim mmusua; wɔn dodow yɛ mpem aduasa abien ne ahannum (32,500).
Eyinom ne mmusua a wɔyɛ Yosef asefo.
38Eyinom ne mmusua a wofi Benyamin ase.
Belafo abusua no, wɔde too wɔn tete agya Bela;
Asbelfo abusua no, wɔde too wɔn tete agya Asbel;
Ahiramfo abusua no, wɔde too wɔn tete agya Ahiram;
39Sufamfo abusua no, wɔde too wɔn tete agya Sufam;
Hufamfo abusua no, wɔde too wɔn tete agya Hufam.
40Eyinom ne mmusua a wofi Belafo mu;
Ardfo a wɔde wɔn too wɔn tete agya Ard;
Naamanfo a wɔde wɔn too wɔn tete agya Naaman.
41Na mmarima a na wɔwɔ Benyamin mmusua no mu nyinaa dodow yɛ mpem aduanan anum ne ahansia (45,600).
42Eyi ne abusua a efi Dan ase.
Suhamfo abusua no, wɔde too wɔn tete agya Suham.
Na Dan asefo no nyinaa yɛ Suhamfo. 43Mmarima a na wɔwɔ saa mu no nyinaa dodow yɛ mpem aduosia anan ne ahannan (64,400).
44Eyinom ne mmusua a wofi Aser ase:
Yimnafo abusua no, wɔde too wɔn tete agya Yimna;
Isuifo abusua no, wɔde too wɔn tete agya Isui;
Beriafo abusua no, wɔde too wɔn tete agya Beria.
45Eyinom ne mmusua a wofi Beria ase:
Heberfo de wɔn ho too wɔn tete agya Heber;
Malkielfo de wɔn ho too wɔn tete agya Malkiel.
46Na Aser wɔ ɔbabea bi a ne din de Sera.
47Mmarima a na wɔyɛ Aser asefo no nyinaa dodow yɛ mpem aduonum abiɛsa ne ahannan (53,400).
48Eyinom ne mmusua a wofi Naftali ase:
Yakseelfo abusua no, wɔde too wɔn tete agya Yakseel;
Gunifo abusua no, wɔde too wɔn agya Guni;
49Yeserfo abusua no, wɔde too wɔn tete agya Yeser;
Silemfo abusua no, wɔde too wɔn tete agya Silem.
50Mmarima a na wɔwɔ Naftali mmusua nyinaa mu no dodow yɛ mpem aduanan anum ne ahannan (45,400).
Nnipa Dodow A Wɔkan Wɔn
51Nnipa dodow a wɔkan wɔn no ano si mpem ahansia ne baako ahanson aduasa (601,730).
52Afei, Awurade ka kyerɛɛ Mose se, 53“Kyekyɛ asase no ma mmusua no sɛ wɔn agyapade, sɛnea wɔn dodow te. 54Ma abusua a ɛso no agyapade kɛse na abusua a esua no agyapade ketewa. 55Hwɛ sɛ wɔnam ntontobɔ so bɛkyekyɛ asase no. Nea ɛsɛ sɛ kuw biara nya no begyina nʼagyanom abusuakuw din dodow so. 56Ɛsɛ sɛ wɔbɔ ntonto wɔ agyapade no kyekyɛ so wɔ akuw akɛse ne nketewa no mu.”
57Eyinom ne Lewifo a wɔnam wɔn mmusua so kan wɔn:
Wɔde Gersonfo too wɔn tete agya Gerson.
Wɔde Kohatfo too wɔn tete agya Kohat.
Wɔde Merarifo too wɔn tete agya Merari.
58Eyinom nso yɛ Lewifo mmusua:
Kohat yɛ Amram tete agya. 59Bere a Lewi wɔ Misraim no, wɔwoo ɔbabea a ne din de Yokebed. Kehat babarima Amram waree no. Wɔn na wɔwoo Aaron, Mose ne Miriam. 60Aaron woo Nadab, Abihu, Eleasar ne Itamar. 61Nanso, bere a Nadab ne Abihu de ogya a ɛnyɛ kronkron brɛɛ Awurade no, wowuwui.
62Nnipakan no mu no, na Lewifo nyinaa dodow yɛ mpem aduonu abiɛsa (23,000). Wɔkan mmarima a wɔadi fi ɔsram kosi mpanyimfo so. Nanso, wɔammu Lewifo no ano anka Israel nnipakan no ho, efisɛ wɔrekyɛ nsase no ama mmusuakuw no, wɔamma Lewifo no bi.
63Enti sɛnea Mose ne ɔsɔfo Eleasar fa kyerɛɛ nnipa no ano wɔ Moab bepɔw a ɛbɛn Asubɔnten Yordan a na wɔatwa Yeriko ne no. 64Na saa nnipa yi mu biara nni hɔ a ɔfra wɔn a Mose ne Aaron kan wɔn wɔ Sinai sare so no mu. 65Efisɛ Awurade ka kyerɛɛ saa Israelfo no se wobewuwu wɔ sare no so. Anka wɔn mu biara, gye Yefune ba Kaleb ne Nun babarima Yosua.
AKCB : 4 Mose 26